Oromoon yeroo samamu caalisee ilaaluu hin qabu, Oromoo mal tatan?
Mootumma Ethiopia Keyata 49 lakkoobsa 5 irratti Finfinnen waan Oromiyya keessa jirtu fi lafa Oromoo waan tateef Tajjajila fi dhiiyeesii hunda Oromiyaa irra waan argatuuf Oromiyyan Finfinne irratti mirga qabdu fi fayidaa isheen argachuu qabduu kun ammoo balinan seeran mirkana’af jeedha.
Yeroo Tigiren Lafa Oromoo Godina Addaa Oromiyya fudhachuf dhadatuu: Oromoon akkamitti caalisee Galee mana rafa?. OPDOn (Abdulazizi Mohamad, Diriba Kuma fi Dhaabbaa Dabale) Kiyata 49 lak.5 irratti Oromiyyan Finfinnee irra Fayida argachuu qabdi kan jeedhu Oromiyyaf erga Heeran mirkana'ee waggoota 23 Finfinnee irra mal argate? Oromiyyan Mallaqaa Finfinnee irra argate qabdi? Ijjoolle Oromoo finfinnee keessatti Afaan isaanin baracha jiru? Finfinneen Oromiyya irraa Bishan, Ibsa, fi Muka argatuuf mal kafala jirti? Xuriin Finfinnee keessa Oromiyyatti gadi ya'ee Oromiyya Baleessa jiruf Finfinnen Beenya hangama kafalte? OPDOn mirga Oromoo Kabachisan jira jeedhu Oromiyyan mirga isheen Finfinnee irratti qabduu maliif hin kabachifne? Xifumaa Godina Addaa Oromiyyan waggotoa meqaa Misoomisaa ba'ee Finfinneef keenina jeechun hangm Oromoo Tufachudha? Dargaggoon Oromoo fi Ummani Oromoo guutun dhimmaa kana irratti yoo caaliftan Oromoo dha ofin hin jeedhina.
Kalessa Naannoo Finfinne uummati jiru harki 95% qoonan bula ture, harraa harki 63% egiduu qabeenya Tigire (Guard) yamuu ta'uu, harki 30 ammoo Tigiroota naannichatti mana ijaratanfi dhagga akka batuu raggaan achi irra arganee ni mulisa. Haaluma kanan Oromoon naannoo Laga Lafto /Laga dadhi, Alemtena-Sebeta, Burayu-Ashewa Meda, Lebu-Lafto fi Akaki Beseqa buqa'aan enyuma isaan dhabani jiru. Finfinnen kanan dura gaafa Qaliti humnan Oromiyya irra fudhatuu qabeenya Oromiyyan Qabu fi Misooma Oromiyyan achi irratti geggesa turef beenya tokko ilee utuu hin basin irra fudhate ammas akkas gochuuf deemu, kana Oromoo hundi dura dhabachun falmachuu qaba.
1. Mirga Oromiyyan Fifinnee irratti argachuu qabduu Qooratamee akka hojii irra oluu Oromiyyan bara 2003/1995 koree tokko hundese ture, koree kana keessa wara jiran kessa Dhaabba Dabalee, Ittigaafatama wajjira Dargaggoota yeroosi fi Jamal Abaso kkf koreen ijaramee hojiin isaa hanga ammatii maliif hin xumuramne? Moo Oromiyya mirga ishee gaafatee deebi dhabdee? Kun Uummata Oromoof malif ifaa hin godhamnee?
2. Finfinnee keessatti Aanaa hunda keessatti mani barumsaa Afaan Oromoo banamee akka ijoolleen Oromoo Afaan isaani baratan karoorii ba'ee sagantan ba’e Ittiaanan Mootumma Naannoo Oromiyya yeroosi obbo Dagafee Bulaa bu’uura isaa ebban banani turani garuu ijoolle Oromoof hanga amma mani barumsaa Aanalee Finfinee tokko keessatti ilee hin banamne maliif? Ijoolleen Oromoo lafa isaan Finfinnee irratti afaan isaan barachuu dhabuun maliif kana siirresun dirqama OPDO miti?
3. Mirga Oromiyyaan Finfinne irratti qabachuu qabdu Heera Federala Ethiopian murteese TPLF hojii irra olchuu didee wagoota 23 ukamsee jira. Kun akka Hojii irra oluu Miseensoon Paarlamaa OPDO maliif hin goone?
4. Waggoota 23 mirgi Finfinne irra Oromiyyan qabachuu qabdu seeran mirkana'ee utuu hojii irra hin oliin dabalatan lafa Oromoo Goodina Adda Oromiyya Finfinne jala akka oluu gaafachuun tufii Tigiren Oromoof qabduu miti? Kana Abdulazizifaa atamiin fudhatani seena hin sodatan? Miseensoon OPDO Millioon 4 yeroo Oromoon samamuu caalisee ilaalu fi Uummataa isaa ukamsee ta’uun siiridha?
5. Uummani Oromoo fi Dargaggoon Oromoo yeroo Tigiren lafaa Oromoo humnan fudhatu caalisun maliif? Waggaa meeqa sodacha jiratuu? Baratoon Oromoo Godina adda kana keessa jiran Tigire achii ari’uu hin danda’ani? Hanga yoomitti gadii guguftani diina jala adeemtu?
6. Diasporan ala jiru akka Bedele Biraa irratti Petation Malateese mormii isaa argisisee kana irratti Petation Malateesun Moormii isaa argisus qaba; diasporan wal balaleefatuu Tigiree maliif hin balalefatuu?
7. Dhabbilee siyyassaa Oromoo hundi dhimmaa kana irratti mormii isaan ibsa basuun mulisuu qabu. Dhaabileen Oromoo caalisuun mali irra madee?
8. Oromiyya Goodiina Adda kana kan Misoomsa turte, Ashura nannoo kana irra argatun uummataa Nannoo kanaaf Addaa fi afaan isaa ittin gudisuuf malee misoomsite Tigiref lachuuf miti, amma garu Tigiren jalatansi jibitansi isiin irra fudhana jeedhe yeroo falmu arga fi dhaga'aa jira, oftuluma Tigire kana warii nu irra ka'aan OPDOn of irra busuu qabu.
9. Finfinne qabiyeen ishee duran Kara Gengoon Marsuu keessa qoofa ammas achi ala ba'uu hin qabu, Finfinnen gudachuu qabdi warii jeedhan Finfinnee dalga gudachuu utuu hin tanee Ol gudachuu qabdi, Gammoo dheedheera ijaruun Wajjiralee walti qabun bakka gammoo gurgudati galchuun rakkon furama malee qotatee bula buqisun ta'uu hin qabu, OPDOn fi Uummanii Oromoo kanan falmachuu qaba.
Uummanni Oromoo biyya keessa fi biyya ala jiru dhimma kana irratti hirira nagaa gochun falmachuu qaba, Media hunda irratti iyyata bareesuun wal damaqisee Petation mormii mallateesun dura dhabachuu qaba, Konkoolata Finfinne dha ba’uu fi galuu yabachuu dhisuu qaba, Konkoolata kan Oromoo ta’aanfi Gabatee ORO qaban qoofa fayadamuu qaba, Habashoota naannoo sun qubatan irra bituu fi itti gurguru dhisuu qaba, Hotela, Mana Barumsa, Suuqi, Takisi, Habashoota fi kkf hund fayadamuu dhisuu qaba. Oromoon mormii fi Uguraa Habashoota irratti gochun diini akka naannoo Oromiyya keessa ba’uu dirqisisuu qaba. Namoon lafi isaan irra fudhamee hundi wal gurmeesun hanga dhumati falmachuu qabu, sababin isaa gara fulaa duratti seeri gaafa dhufu qabeenya kun hundi isaanf ta’uu mala, kanaaf ammoo hara falmachuu qabu, kana haraa hin falmatiin bara Oromoon abba biyya ta’uu gaafi dhiyeesu hin danda’uu.